विज्ञान प्रविधि – Page 21 – News Of Nepal
सोलार वाटर हिटरले कसरी काम गर्छ ? सोलार वाटर हिटरले मुलत: ‘कालो वस्तु (Black Body)’ को वैज्ञानिक सिदान्त अनुसार काम गर्छ। कालो वस्तु (Black Body) ले बढि घाम सोस्न सक्ने हुन्छ। कुनै पनि कालो वस्तुमा घाम परेपछि त्यो तापमा परिणत हुन्छ। त्यसैले ताप पैदा गर्न सोलार को कलेक्टर (घाम पर्ने ठाँउ) मा कालो रङ पोतिएको हुन्छ।..
इन्टरनेटमा चीनसँग सम्झौता,भारतको एकाधिकार तोडियो
काठमाडौं, २३ मंसिर - अबको केही साता भित्र नेपालको भारतसँग रहेको इन्टरनेट परिर्निभरता हट्ने भएको छ। नेपाल टेलिकम र चाइना टेलिकम ग्लोबलबीच रसुवाको जिलोङ गेटवे हुँदै चीन र नेपाललाई स्थलीय केबल मार्ग (टेरिस्टेरियल केबल रुट)बाट जोड्न नेपाललाई आईपी सर्भिस उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ।..
काठमाडौँ, २२ मंसिर - मेसेजिंग एप ह्वाट्सएपले एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताका लागि दुई नयाँ फिचर पेश गरेको छ । अब सबै एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताले कुनैपनि भिडियो डाउनलोड गरिरहेको बेलामै उक्त भिडियो स्ट्रिम गर्न सक्नेछन् र एनिमेटेड जिआइएफ तस्वीर आदान प्रदान गर्न सक्नेछन् । यसअघि केवल ह्वासएप बिटा भर्सनमा मात्र..
रविन्द्र लम्साल मेरा एक मित्रले, एक इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग '१६ मेगा बिट पर सेकेन्ड'को फाइबर इन्टरनेट जोडेका रहेछन् । प्राविधिक रूपमा भन्नुपर्दा उनले डाउनलोड स्पिड '२ मेगा बाईट पर सेकेन्ड' पाउनुपर्ने हो । तर स्पिड चेक गर्दा '१.२८ मेगा बाइट पर सेकेन्ड'भन्दा माथि गएन । उनले पाउनुपर्ने स्पिडभन्दा '०.७२..
भिडियो कलको लागि कुन एप सस्तो ?
काठमाडौं,१६ मंसिर- व्हाट्स एपले हालै मात्र भिडियो कलिङ फिचर ल्यायो। यसले भिडियो कलिङको सुविधालाई व्यवस्तित बनाएको छ। तर व्हाट्स एप मात्र भिडियो कल सुविधा दिने एक्लो एप भने होइन। स्काइप र एप्पलको फेस टाइम यसको लागि उत्तिकै लोकप्रिय छन्। स्काइप पहिलो यस्तो भिडियो कल एप हो जसको प्रयोग करोडौंले गरिरहेका..
काठमाडौं, १४ मंसिर-उत्कृष्ट सेल्फी क्यामेरा तथा अत्याधुनिक प्रविधि सुसज्जित फोनका रुपमा विशेष परिचित ओप्पो डिएस प्रालिले आफ्नो स्मार्टफोन मोडल ‘ए३७’को नयाँ मूल्यको घोषणा गरेको छ । कम्पनीका अनुसार अब उपभोक्ताले ५ इञ्च आईपीएस डिस्प्लेसहितको ओप्पो ‘ए३७’ २० हजार ४ सय ९० मा खरिद गर्न सकिनेछ । कम्पनीले..
रञ्जनहरि कोइराला काठमाडौ, ११ मंसिर - जति राम्रो सोच उति धेरै अवसर । हो पनि कुनै पनि एप्सको सफलता निर्माणकर्ताको सोचमा भर पर्छ । पछिल्लो समय बजारमा लाखौंको संख्यामा एप्स निर्माण भएका छन् । त्यसमा कतिले सफलता हात पारेका छन् भने कतिपय त्यसै हराएका छन् । सहजताका लागि निर्माण गरिएका एप्सको प्रयोग पछिल्लो..
सरकारका डिजिटल सूचना असुरक्षित
अजय शर्मा काठमाडौँ, ७ मंसीर - नेपाल सरकारका डिजिटल सूचना कति सुरक्षित होलान् ? पक्कै पनि पूर्ण सुरक्षित नै हुनुपर्छ, राष्ट्रिय महìवका सूचनाको व्यवस्थापन भएकै होला । यस्तै सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ । बाढीपहिरो, भूकम्प वा अन्य यस्तै प्राकृतिक प्रकोप तथा प्रलयबाट डिजिटल डाटा सुरक्षित..